Sida loo noqon Tababaraha makhaayad | Job & khayraadka mustaqbalkiisa ciyaareed ka USAHello | USAHello
maamulayaasha Restaurant ka dhigaan wax walbo socda si habsami makhaayad. Waxay macaamiisha ka qabtaan oo ay u maareeyaan shaqaalaha. Baro shaqada iyo ogaato tallaabooyinka aad u baahan tahay in aad qaadato inuu noqdo tababaraha makhaayad.
waa maxay Tababaraha makhaayad?
maamulayaasha Restaurant loo hubiyo in wax kasta oo makhaayad la ordaya sidii ku habboonayd. Shaqada Tababaraha makhaayad sidoo kale loo yaqaano maamulaha adeega cuntada.
Iyadoo in ka badan hal milyan oo makhaayadaha ee dalka Mareykanka, uu jiro dalab maamulayaasha makhaayad wanaagsan. warshadaha makhaayad wuxuu u baahan yahay dadka daryeela oo ku saabsan dadka iyo cuntada si ay u maareeyaan makhaayadaha, kuwaas oo.
Shaxda hoose waxay kuu sheegaysaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka ku saabsan mustaqbalkiisa makhaayad tababare. Waxa ay muujinaysaa in inta badan maamulayaasha iyo mulkiilayaasha makhaayad bilaabay ka hooseysa iyo shaqeeyay oo ay maraan jidkii kor. Taas macnaheedu waxa weeye waxa laga yaabaa inaad u baahnayn shahaadada si ay u bilaabaan on waddada xirfadda this. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dad badan ayaa shaqo helay makhaayadaha iyo in shaqooyin ka sii sara mari doonaan mustaqbalka.
Maxaad ka fili kartaa in shaqada tababare makhaayad?
Waajibaadka Tababaraha makhaayad
Waxay macaamiisha iyo shaqaalaha dusha ka qaban, sahay, iyo tayada. Maareeyayaasha arrimaha adeegga macaamiisha ka qabtaan iyo xalinta dhibaatooyinka ka mid ah shaqaalaha. Waxay hubisaa in tayada cuntada iyo adeegga wanaagsan yahay dhigi. Intaa waxaa dheer, oo ay u hubiyaan in wax walba uu diyaar u yahay ka hor inta makhaayad furo. Waxay sidoo kale maareeyo laga yaabaa in diyaarinta cuntada, stock abaabulka, oo ku amray sahay. Ugu dambeyntii, maamulayaasha dhigi shaqaalaha qalab nadiif ah oo raac xeerarka nabdoonaanta.
maamulayaasha Restaurant ayaa ka mas'uul ah wareysanaya, shaqaalaynta, iyo kormeerka xubnaha shaqaalaha cusub. Waxay sidoo kale maareeyo laga yaabaa in miisaaniyad iyo mushaharka. Mararka qaarkood, maareeyayaasha ayaa sidoo kale milkiilayaasha makhaayadda.
Daawo this video in badan oo ku saabsan waxa milkiilayaasha makhaayad samayn bartaan
maamulayaasha Makhaayadaha shaqeeyo makhaayadaha leedahay qoys-, dhakhso-cunto iyo maqaayado kale silsilad, jiga, iyo hotels. maamulayaasha Restaurant sida caadiga ah waxay leeyihiin xafiis halkaas oo ay ku sameeyo hawlaha maamul iyo maarayn hawlaha ay maalin-to-maalin.
Sagaal ka mid ah tobankii maqaayado ay leeyihiin in ka yar 50 shaqaalaha. Laakiin goobta noqon kartaa mashquulsan.
MUSHAHARKA maamulayaasha makhaayad
mushaharka maamulayaasha Restaurant 'dabooli ballaaran oo kala duwan, laakiin waxay kasban celcelis ahaan $35,570 sannad kasta. mushaaraadka Annual bilaabaan $19,865 iyo u kicin inay soo $54,300. mushaar saacadle ah u dhaxayn $9.55 in $26.09.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa tababare makhaayad wanaagsan?
awoodo inuu dhawro aragti wanaagsan ka yar stress
awoodin in ay si fiican u shaqeeyaan iyo maarayn dadka
wacan, Sanherdin edeb
fiiro dheer ee faahfaahin ah
awoodaan in ay ka jawaabaan oo go'aamo deg deg ah
aad u abaabulan
diblomaasiyadeed ee xaaladaha adag
aqoon iyo waayo-aragnimo dhaqanka jikada iyo makhaayad
xirfad xiriir oo wanaagsan
farsamooyinka xalinta khilaafaadka
Tababarka iyo waayo aragnimada
Dadka intooda badan ee ganacsi makhaayadda bilowdo shaqo heer bilow ah makhaayad iyo shaqeeyaan oo ay maraan jidkii kor. On shaqo-ku-aragnimo waa habka ugu badan in ay helaan tababar.
Sida ay jiraan dalabaad sare oo loogu talagalay dadka si ay u buuxiyaan shaqooyinka heerka galista, waxaad bilaabi kartaa tababar aad mustaqbalkiisa by helaan shaqo makhaayad. On shaqo-ku-aragnimo waa habka ugu badan tahay in ay gaaraan aad gool.
Maxaa dhacaya haddii aadan aad dareento diyaar u aheyn in shaqo codsato in makhaayad? Qaar ka mid ah xarumaha shaqada iyo ururo kale oo ay bixiyaan tababar shaqo aasaasiga ah oo lacag la'aan ah. Qaar ka mid ah tababarka waxaa ka mid ah xirfadaha shaqo si ay qaxootiga iyo soo galootiga ugu galaan shaqooyin makhaayad iyo shaqooyinka kale ee adeegga cuntada.
Muhiim: Uma baahnid in aad bixisid fiiga waxbaridda waaweyn si aad u hesho tababarka aasaasiga ah ee xirfadaha makhaayadaha cuntada.
Sida aan ka bartay, sagaal ka mid ah tobanka maamulayaasha makhaayad gaadheen meel ay ka shaqeynayaan kor ka hooseysa. Waxay u badan tahay in aadan haysan shahaado. Laakiin shahaadooyinka caawin kartaa in ay ka hor ka heli. Haddii aad tahay mid aad u go'an in ay si deg deg ah horumarinta, waxaad ka heli kartaa tababar dheeraad ah by dhigata dugsiga ama fasalka online. aad sameyn karto koorso waqti-dhiman ah oo waqti isku mid ah in aad waxaa lagu helo waayo-aragnimo shaqo iyo kasbasho nololeed.
Waxaa jira koorsooyin badan oo kala duwan caddeyn in maamulka makhaayad. Waxaa jira koorsooyin lagu soori dalab afar sano iyo laba sano kulliyadaha, dugsiyada, Kuliyadda, iyo dugsiyada kale ee xirfadaha. Waxaad awoodi kartaa lkasban online ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee koorsooyinka waxaad ka fiirsan kartaa:
Read ku saabsan noocyada kala duwan ee koorsooyinka maamulka makhaayad ay bixiyaan dugsiyada la aqoonsan yahay.
Baro oo ku saabsan barnaamijka ManageFirst, Dabcan ah maamulayaasha makhaayad tababarka abuuray by Association Restaurant Qaranka. Waxaa la bixiyo kulliyadaha iyo jaamacadaha badan. Eeg haddii la bixiyo koleejka degmadaada.
Hubi dowladda shaqada xarunta ee ltababarka ocal jiheeyaha waayo, meesha aad degan tahay.
Dadka qaarkood waxay doortaan in ay isku qoraan barnaamijka maamulka ganacsiga iyo maamulka labo sanno ah ka hor inuu noqdo tababaraha makhaayad. Raadi college beesha kuu dhow.
Waxaad fiirsan kartaa Dabcan online, laakiin hubi waa la aqoonsan yahay.
Waxaa jira qaar ka mid ah taageero dhaqaale loo heli karo gettin baxday ganacsiga makhaayadda. Baro badan oo ku saabsan deeq shaqooyinka makhaayad.
Sida loo sameeyo ganacsi kuu gaar ah
Shaqooyinka iyo xirfadaha ee adeegga cuntada
Deeqaha waxbarashada ee qaxootiga iyo soo galootiga
Raadi sharaxaada shaqada, mushaaraadka iyo macluumaadka kale ee maamulayaasha makhaayad / foodservice magaalada ama gobolka aad
Eeg tirakoobka ee Restaurant Association Pocket Qaranka Wikipedia
Baro shaqooyin ku saabsan la mid ah shaqada tababare makhaayad